बिहे गर्नु अघि युवतीलाई सोध्नैपर्ने ५ महत्वपूर्ण प्रश्नहरु जानी राखौ – Rapti Khabar
अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो। हरेक वर्ष यो बेला रुघाखोकी लाग्नेगरेकै थियो। तर यसपटक कोरोना संक्रमण फैलिएकाले सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना संक्रमण भयो कि भनेर त्रसित हुनेको संख्या धेरै छ। हुन पनि हाे, सामान्य रुघाखाेकी लागेकाे हाे कि काेराेना, कसरी छुट्याउने? यस विषयमा जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेको भनाइ यस्तो छ : मौसमी रुघाखोकीका लक्षण […]